National mpahay siansa, University “Kharkov Aviation Institute”
National mpahay siansa, University “Kharkov Aviation Institute” Details
fanafohezan-teny : KhAI
Créé : 1930
Aza adino ny discuss National Aerospace University “Kharkov Aviation Institute”
Apply to National Aerospace University “Kharkov Aviation Institute”
Ny Khai naorina tao 1930. Ny tantara dia mifandray akaiky amin'ny fampandrosoana ny fiaramanidina injeniera sy ny siansa. Ny University dia nalaza noho ny famoronana ny voalohany any Eoropa fiaramanidina haingam-pandeha amin'ny fipetrahana retractable fitaovana sy ny fananganana ny famolavolana ny turbojet maotera nitombo ny mpampianatra ny Khai A. M. Liulka izay rehefa afaka izany, tonga ny akademisiana sy ny mpamorona ny maro rafitra ny fiaramanidina milina anisan'izany ny maotera ny fiaramanidina Su-27.
Ny Khai dia tsy manam-paharoa fanabeazana ambony andrim-panjakana izay ny fiaramanidina mandroso ny Institute Design Burean eo ambany fanaraha-mason'ny mpampianatra I. G. Neman dia namoaka tao amin'ny fiaramanidina serially zavamaniry sy hihazakazaka amin'ny mpandeha Air Madagascar.
From 1977 ny 1984 ny Mpamorona General O.K. Antonov mihazakazaka ny sampan-draharaha ny fiaramanidina rafitra tao amin'ny Khai.
In 1978 ny Khai dia nomena ny anaran'i N. ianareo. Zhukovskiy. In 1980 ny Institute no nahazo ny baikon'i Lenin. In 1998 ny N. ianareo. Zhukovskiy State University mpahay siansa, "Kharkov Aviation Institute" naorina teo amin'ny fototry ny amin'ny Khai sy amin'ny 2000 ny University nahazo ny toerana misy ny National fanabeazana andrim-panjakana ambony sy nahazo anarana avy amin'ny National mpahay siansa, Uuniversity Kharkiv Aviation Institute.
Nandritra ny fotoana ny fisiany ny University no nampiofana momba ny 60 ths injeniera. Mihoatra ny 80% ny manam-pahaizana manokana amin'ny fianarana ambony, izay miasa ao amin'ny faritra Okrainiana mpahay siansa, no nahazo diplaoma avy amin'ny Khai.
Amin'izao fotoana izao momba ny 9.5 ths mpianatra ary 160 Lahatsoratra-nahazo diplaoma ireo mpianatra no niofana tao amin'ny University; 650 mpampianatra ary 2.5 ths mpampiasa miasa eto. Anisan'ny foto-kevitra misy 120 Mpampianatra sy ny Kandidà ny Siansa. Anisan'ireo mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'i misy ihany koa: 1 Firaisana Sovietika State Lenin Loka, 7 Firaisana Sovietika State loka mpandresy, 28 Ukraine State loka mpandresy, 11 Firaisana Sovietika Filankevitry ny Minisitra ny loka mpandresy.
Ny Khai dia mpikambana ao amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena ny Universitys; Global Association, Fikambanana ny Indostria sy Airport Teknolojia; izany ihany koa eo amin'ny iraisam-pirenena sy an'ny Catalogue ny Association ny toeram-pampianarana ambony ao an-tanàna Kharkiv INTERVUZ, ary koa ny mpahay siansa, Agency Okraina.
Ny Khai dia mpiara--mpanatanteraka fandaharana sasany izay nentina avy amin'ny anjerimanontolo sy ny orinasa any Etazonia, Japana, Alemaina, Frantsa, Meksika sy Chine. Ny University mandray anjara amin'ny fandaharana ny famoronana ny "Alfa" toby habakabaka iraisam-pirenena.
In 1992 ny Khai indray ny fampiofanana ny mpianatra vahiny ny 500 vahiny olom-pirenena avy amin'ny 40 firenena ao Azia, Afrika sy Amerika dia nampiofanina isan-taona tao amin'ny University.
Ny Khai manarona ny faritany mitokana amin'ny tanàna eo amin'ny ala-ampahany faritra, ny faritra oharina ny momba ny 25 hektara. The University Manana 8 akademika trano, fikarohana institiota sy ny laboratoara, tranomboky dia 1 ml boky in tahiry, fonenan'ny mpianatra, sporty sarotra, pisinina, preventurium hopitaly ny fanampiana ara-pitsaboana voalohany, efitrano fisakafoana, banky, ankizy zaridaina, sns.
Admission process in National Aerospace University “Kharkov Aviation Institute”
For apply to National Aerospace University “Kharkov Aviation Institute” mpianatra vahiny tsy maintsy mampihatra-tserasera Okrainiana fieken-keloka amin'ny alalan'ny Center.
drefy, penitra sy ny taratasy fanamarinana
tontolo iainana, environment and balanced nature management
Ny Khai naorina tao 1930. Ny tantara dia mifandray akaiky amin'ny fampandrosoana ny fiaramanidina injeniera sy ny siansa. The university is famous for its creation of the first in Europehigh-speed airplane with a retractable landing gear and the creation of the design of the turbojet engine developed by teacher of the KhAI A. M. Liulka izay rehefa afaka izany, tonga ny akademisiana sy ny mpamorona ny maro rafitra ny fiaramanidina milina anisan'izany ny maotera ny fiaramanidina Su-27.
The KhAI is a unique higher educational institution where the airplanes developed by the Institute Design Bureau under the supervision of professor I. G. Neman dia namoaka tao amin'ny fiaramanidina serially zavamaniry sy hihazakazaka amin'ny mpandeha Air Madagascar.
From 1977 ny 1984 ny Mpamorona General O.K. Antonov ran the department of airplane structure at the KhAI.
In 1978 ny Khai dia nomena ny anaran'i N. ianareo. Zhukovskiy. In 1980 the institute was awarded with the order of Lenin. In 1998 ny N. ianareo. Zhukovskiy State Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute” was founded on the basis of the KhAI and in 2000 the University got a status of the National higher education institution and was renamed the National Aerospace University AKA Kharkiv Aviation Institute.
Ianao ve mila discuss National Aerospace University “Kharkov Aviation Institute” ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
National mpahay siansa, University “Kharkov Aviation Institute” amin'ny Map
Photos: National mpahay siansa, University “Kharkov Aviation Institute” ofisialy Facebook
National mpahay siansa, University “Kharkov Aviation Institute” hevitra
Join to discuss of National Aerospace University “Kharkov Aviation Institute”.